Chii chinonzi EAT uye ungachiite sei mubhizinesi rako? | ECommerce nhau
MuSEO EAT zvinoreva Chiitiko, Chiremera uye Kuvimbika (Hunyanzvi, Chiremera uye Kuvimbika). Izwi rekuti EAT rakapinda mukurumbira muna Nyamavhuvhu 2018, pakavandudzwa muGoogle algorithm inonzi yekuvandudzwa kwekurapa. Kukosha kwayo kunobva pakuti mukupedzisira iwe unogona kutora mukana nazvo kuita kuti mashandiro abatsire muchitoro chako kana bhizinesi repamhepo.
EAT inotamba yakakosha basa muGoogle algorithm inogadziridza. Iyo "Yako Mari, Hupenyu Hwako" (YMYL) saiti akanyanya kukanganiswa nematambudziko eEAT. Kana yako saiti haina kukodzera muchikamu cheYMYL, iwe haufanirwe kutya. Zvakadaro, zvakakosha kuti uzive kuti nekuti e-commerce masaiti anotambira ruzivo rwekadhi rechikwereti, anoonekwa semapeji eYMYL. Izvo zviri kutaurwa, EAT haisi algorithm, asi Google algorithms akagadziridzwa kutsvaga zviratidzo zvinowona kana ivo vari kuongorora zvemukati neakanaka kana akaipa EAT. Iyo yakaipa EAT inogona kutungamira kune yakaipa chinzvimbo.
Iyo poindi yeEAT yeYMYL mawebhusaiti ndeyekuti ivo vanoda nyanzvi yakasimbiswa yekupa izvo zvirimo kana kushanda padhuze nevanhu vane humbowo hwakakodzera. Nekudaro, kunze kwezvinhu zvinodaidzwa zveYMYL - izvo zvinowanzo shanda nezvekurapa, zvemari, zvekutenga kana zvemutemo ruzivo - izvo zvirimo zvevanyanzvi zvinoenderana nemitemo yeEAT ndeavo vanosangana nezvinodiwa nevateereri vavo uye vanonzwisisa chinangwa chekuti kune kuseri kwemibvunzo kana mibvunzo yavanomutsa.
1 EAT: Hapana mamaki uye haisi chinzvimbo chepamusoro
2 Nei EAT ichikosha kumapeji ako ewebhu?
3 Saka EAT inobata sei vashanyi vesaiti yako?
4 Iwe ndiwe zvaUNODYA
EAT: Hapana mamaki uye haisi chinzvimbo chepamusoro
Usatombo kunetseka, hapana yakakwira EAT mamaki ayo ako mapeji anofanirwa kuwana. Iyo Google algorithm haina kupa EAT mamaki kumasayiti. Usarasikirwa nehope uchifunga nezvenzira dzekuvandudza iwo mamakisi. EAT haisi zvakare yakatarwa chinzvimbo chinzvimbo. Google ine mazana maviri ezvinzvimbo pazvishoma, kusanganisira peji kumhanya, kiyi yekushandisa mumazita ezita, uye nezvimwe. Asi EAT ine maitiro asina kunangana pane ako mapeji masosi, sezvo zvirimo zvinofanirwa kufanana EAT zviyero. Nenzira iyoyo, inova chinzvimbo chepamusoro.
EAT inomirira "Chiitiko, Chiremera, Kuvimbika."
"Hunyanzvi" - Unofanirwa kuve nyanzvi mumunda mako. Chiitiko zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuratidza hunyanzvi hwomugadziri weiyo Main Content kana (MC) wozvitaura mune zvemukati. Chiitiko hachina kukosha zvakanyanya kune kuseka kana makuhwa mawebhusaiti, asi zvakakosha kune ekurapa, emari, kana emutemo mawebhusaiti. Nhau dzakanaka ndedzekuti chero saiti inogona kuratidza hunyanzvi kana zvirimo zviri zvechokwadi uye zvinobatsira kune vashandisi.
"Chiremera" - Unofanirwa kuratidza kuti uri chiremera kana chiremera chemusiki weMC. Uye iwe unogona kuwana izvi kubva pane zvakaitika kune vanyori vako kana iwe pachako. Kana peji rako riri renharaunda kana hurukuro yehurukuro, mhando yehurukuro inotyaira masimba. Kiredhiti akakosha, asi ndozvazvakaitawo zviitiko zvewega sekuwongorora.
"Kuvimba" - Unofanirwa kuratidza vashandisi kuti vanogona kuvimba musiki kana kambani yeMain Content, iyo MC pachayo newebsite. Kuvimbika kunonyanya kukosha kune e-commerce mawebhusaiti ayo anokumbira vashandisi kune avo kiredhiti kadhi ruzivo. Zvese zviri pane yako saiti zvinofanirwa kuita kuti vashandisi vanzwe vakachengeteka pavanenge vachishanya. Sekutangira, iwe unofanirwa kubva wangoburitsa chitupa cheSSL pane yako saiti sekungangoita 70% yemapeji ekutanga mhedzisiro inoshandisa SSL (ndiyo imwe yemazhinji maGoogle anonongedzera).
Unofanira kudya kuti urarame. Uye zvakare zvirimo mune yako webhusaiti. Rumwe rudzi rwe "kudya," asi pfungwa yacho yakafanana.
Ndizvozvo, uye isu tiri kutaura nezve EAT. Isu takatanga kuona chirevo ichi apo Google's Kutsvaga Hwakanaka Nhungamiro yakaburitswa muna 2014. Asi nekumisikidzwa kweGoogle zviri pamutemo, isu tava kuziva kukosha kweEAT. Gore rino, iyo EAT yakagadzirirwa bhizimusi hombe. Yedu SEO masevhisi anotarisira kugadzira yako saiti kutevedzera zvakakosha zvinhu zveGoogle EAT.
Google inoti EAT iri pakati pezvakakwirira zvitatu zvekufunga kwemhando yepamusoro. Saka kana usati wateerera EAT zvemukati zvisati zvaitika, unofanirwa kutanga uchizviita.
Nei EAT ichikosha kumapeji ako ewebhu?
Saka nei ruzivo, chiremera, uye chivimbo zvichikosha kudaro? Mushure mezvose, nhungamiro yeGoogle yemhando yepamusoro haigadzike chinzvimbo chepeji.
Chaizvoizvo, EAT inosarudza kukosha kwewebhusaiti. Hunhu raters anotora EAT kufunga kana uchitonga kuti saiti kana peji rinopa sei zvaunoda. Ivo vanotarisa kuti vaone kana vari kuwana chiitiko chakanaka online uye kana zvirimo zvichizadzisa zviyero zvavo Kana varatidziri vachinzwa kuti mushandisi angave akasununguka kuverenga, kugovana uye kukurudzira zvirimo, izvo zvinopa saiti nhanho yepamusoro yeEAT.
Funga nezve EAT sechikonzero vashandisi vangasarudze yako saiti pane makwikwi ako. Kudya kunogona kuve nekukanganisa kwakanangana nemaitiro ekuti Google inogamuchira - uye pakupedzisira inosvika - webhusaiti yako.
Saka EAT inobata sei vashanyi vesaiti yako?
EAT inowirirana zvakanyanya neinonzi neGoogle "Yako Mari kana Hupenyu Hwako" (YMYL) mapeji. Iwo maYMYL mapeji ndiwo ane misoro nezvekurapa mazano, zvemutemo, zvemari, izvo mhando yechinhu. Chero chipi zvacho chinogona kukanganisa kana kusakanganisa mufaro, hutano, uye hupfumi hwemushandisi. Mienzaniso inosanganisira:
Chitoro chepamhepo chinokumbira ruzivo rwekadhi rako rechikwereti
Iri blog raamai iro rinopa kuraira pamusoro pekurera vana
A blog kubva kune yemari institution inopa zvemutemo kuraira
Peji yehutano yekurapa inonyora zviratidzo zvehosha isingawanzo
YMYL's epamusoro mapeji ekumusoro anoratidza yakakwira mwero weEAT. Imhaka yekuti kunyanya mushandisi anonzwa paanoshanyira peji, uye zvakanyanya zvirimo zvinoenderana nemubvunzo wekutsvaga, ndipo pazvinosangana nezvinodiwa zveEAT. Masayiti anonyatso kupa mazano anobatsira kana mhinduro kuchinetso achasangana nezvinodiwa izvi zviri nyore pane saiti dzinoedza kuchekesa nehurongwa hweGoogle.
Iwe ndiwe zvaUNODYA
Saka saiti yako inozongobatsira chete sezvaunoisa pairi. Sezvo EAT iri pane ese peji peji uye iyo saiti nhanho, iwe unofanirwa kuona kuti chikamu chega chewe webhusaiti yako chinoedza kuzadzisa zvinodiwa neGoogle. Uye kana ako mapeji achikodzera semapeji eYMYL, izvi zvinotonyanya kukosha.
Asi usango tora izwi redu kwazviri. Google inoti iro peji kana saiti inoshaya EAT "chikonzero chakaringana kupa peji yakaderera mhando." Saka kana usiri nyanzvi, chiremera, kana kuvimbika, peji rako resaiti rinogona kutarisirwa rakaderera mhando.
Iwe unofanirwa kugadzira zvinokwezva, zvinobatsira uye zvine chokwadi zvemukati. Uye iwe unofanirwa kushandisa EAT kuzadzisa zvido zvevose vatambi vemhando uye vashandisi chaivo. Ita izvozvo, uye unenge uchiita izvo zvinoda Google.
Ita shuwa kuti unochengeta peji rino riongororwe - hauzomboziva kana iwe ungangoda chiyeuchidzo chekushandisa EAT nemazvo.
Mumwedzi mishoma yapfuura, pamwe wakaona iro buzzword (kana chirevo, asi) "EAT" ichifamba yakatenderera. Nepo izwi iri ranga riri mudikisheni yemazhinji maSEO kwenguva yakati rebei, kubvira Google yekuvandudza algorithm muna Nyamavhuvhu 2018 (inozivikanwa se "gadziriso yezvokurapa"), kutarisisa kwakawanda kwakaiswa pa "EAT» Kubva kuGoogle, uye kubvira yakagara iri pamiromo uye pamunwe wemamwe maSEOs.
Saka nei ndiri kutaura nezvazvo izvozvi? Nekuti mazuva aunogona kuoneka paGoogle husiku hwapfuura. Kuti ugare zvakanaka paGoogle, unofanirwa kusimudzira zita rako nekuvaka hunyanzvi, masimba, uye kuvimbika - ndizvo chaizvo zvinomirirwa neEAT!
Mune ino posvo, ini ndichavhara mbiru nhatu dzeEAT uye ndigovane matipi ekuti ungabatanidze sei imwe neimwe muchirongwa chako chemukati kuitira kuti ugone kurongedza mazwi akanakisa ekutsvaga muindasitiri yako.
Pakutanga, iyi "yekurapa" yekuvandudza yaiita kunge yakarova akawanda mawebhusaiti anopa hutano uye zvekurapa kuraira, kupfuura chero imwe mira. Naizvozvo, mukurumbira wekutsvaga wekutsvaga kwekushambadzira mutori wenhau Barry Schwartz akazivisa "chiitiko chekurapa."
Nekudaro, nepo chiitiko ichi chakanyatso svikira mawebhusaiti mazhinji ekurapa, chakarovawo mamwe mawebhusaiti anogona kuiswa muzvinonzi neGoogle zvinonzi "nzvimbo dzeYMYL" - hongu, imwe wacky chirevo (uye kwete, haasi munhu akavhiringika achiimba imwe Village Vanhu vakarova ).
Vatengesi veDhijitari vanozivikanwa nekushandisa jargon uye kuva nematani emazwi, asi panguva ino, yaive Google pachayo yakawedzera idzi YMYL neEAT kumurwi unoramba uchikura ungangovhiringidza jargon remukati.
YMYL chiyero chemhando yezvinyorwa izvo zvinomiririra "Mari yako kana hupenyu hwako." Google haina hanya chete nekupa ruzivo rwakanyanya, inodawo kupa ruzivo rwakakodzera. Nemamwe marudzi ekutsvaga, pane mikana yakakura yekukanganisa "mufaro, hutano, kana hupfumi" hwevashandisi; Mune mamwe mazwi, kana aya mapeji ari ehunhu hwakaderera, iwo ane mukana wekukanganisa kugara zvakanaka kwemushandisi.
Naizvozvo, kana zvasvika kune hutano, nyaya dzemari uye kuchengetedzeka, Google haidi kupa zvinongedzo kumapeji anogovera mazano, maonero kana mawebhusaiti anogona kuita hunyengeri. Google inoda kuve nechokwadi sezvinobvira kuti inokurudzira nzvimbo dzinoratidza hunyanzvi hwepamusoro, masimba, uye kuvimbika, zvinova zvinomirirwa neEAT. Iyo nzira yeGoogle yekudzivirira injini dzekutsvaga kubva kune yakaderera-mhando zvemukati izvo zvine mukana wekukuvadza kune yekutsvaga injini.
Kana bhizinesi rako rikawira pasi pechiratidzo chemufaro, hutano, kana hupfumi, saka EAT inogona kuve yakakosha kuti iwe unzwisise, saka verenga mberi!
EAT neYMYL zvinobva pagwaro rakakosha kwazvo reGoogle rinozivikanwa se "Google Search Quality Rater Guidelines."
Muna 2015, Google yakaburitsa zviri pamutemo maGwara aKutsvaga Yemhando Yekuongorora uye izvi zvakatipa pfungwa yezvinoonekwa seyakakwirira (kana yakaderera) webhusaiti yemhando yepamusoro, kubva mumaonero eGoogle.
Iyo bepa rakanyorerwa yako timu yekuyera vanhu, iri kutsvaga kunorema kutenderera nguva uye kuongorora mawebhusaiti ayo ari pamusoro Google mhedzisiro kune izvo zvekutsvaga. Kune zvinoita sezviri zviuru gumi vanhu vanoshandirwa neGoogle kuita macheki macheki, maitiro akagadzirirwa kuyedza kushanda kwematanho ekugadzirisa mukuziva mhando yemapeji ewebhu.
Dzidziso dzechikwata dzeQA dzinozivisa mainjiniya eGoogle maitiro ekuvandudza iyo maseru algorithm. Sezvo vashandi veGoogle vanowanzotiyeuchidza, yavo yekumisikidza algorithm inzira yekuenderera inovandudzika, ine yakajairika meseji.
Duramazwi reOxford rinotsanangura izwi rekuti "nyanzvi" se "ruzivo rwakanyanya kana hunyanzvi mune imwe nharaunda." Nekudaro, kuve neruzivo urwu chete hakusi kuzowana mafashama emigwagwa kuwebhusaiti yako kubva kuGoogle.
Unofanirwa kunzwisisa nzira yekutaurirana nayo ruzivo urwu nenzira inosanganisira vanhu. Izvo ndezvekungova kwete chete neruzivo, asiwo kuziva izvo vateereri vako zvavanoda uye nzira yakanakisa yekuendesa iwo ruzivo kwavari.
Chero nguva iyo Googler painobvunza iwo mubvunzo "Saiti yangu saiti ingavandudza sei masosi ayo?" Mhinduro yekuita kazhinji inoita kunge chimwe chinhu senge, "Gadzira zvemukati zvemukati izvo vateereri vako vangade." Kunyange izvi zvingaite senge mhinduro yakanyanyisa (uye iri), iri mhinduro inopfupisa zvandinonyora mune ino posvo, kutaura chokwadi.
Isu tinogadzira sei zvemukati zvemukati? Zvakanaka, heano mamwe matipi ekupindura iwo mubvunzo:
Tsvaga izvo izvo vateereri vako vari kutsvaga, uyezve sangana uye upfuure izvo zvavanoda. Izvi zvinotanga nekutsvaga kwekutsvaga.
Edza kunzwisisa chinangwa cheinjini dzekutsvaga kuseri kwematemu aunowana panguva yekutsvaga kweshoko.
Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti ndeapi nhanho idzi injini dzekutsvaga dziri parwendo rwako semutengi kana semunhu ari kupinda mune yako indasitiri. Kune akawanda mamiriro ezvinhu pano, zvinoenderana nenyaya yako chaiyo, asi kana chinangwa chako, semuenzaniso, izwi rekutsvaga riri pachena kune mumwe munhu mutsva kumusoro wenyaya, edza kusashandisa zvakawandisa jargon uye / kana mabara .maonero ekuti newbie angangodaro asinganzwisise.
Tsvaga muyero pakati pekutsigira uye kuichengeta iri nyore. Izvi zvinodzikira pakuomesa zvinyorwa kuti zvive zvinodyiwa, uchishandisa zvinoonekwa zvinozipa kana midhiya yakapfuma senge vhidhiyo kana odhiyo. Muenzaniso wakakwana weiyi ndeye Moz's "Whiteboard Chishanu" akateedzana. Tinoda mutengi wemukati kuti anyatsonzwisisa musoro wenyaya pakupedzisira, pasina kuita kuti unetse zvakanyanya.
Funga nezvemibvunzo inotevera inogona kutsvakwa neinjini yekutsvaga uye ive nezvakagadzirira kupindura izvozvo, futi. Zvakakodzera zvekuwedzera zvemukati zvinofanirwa kuve zvakabatana mukati uye nyore kuwana. Izvo ndezvekuva sosi yeruzivo mumunda mako.
Kuva nyanzvi kwakanaka, asi anongova mavambo. Kana dzimwe nyanzvi kana vanokurudzira mune yako yakatarwa vachikutora iwe sosi yeruzivo kana zita rako (kana zita rako) zvikafanana nemusoro wenyaya wakakodzera, saka hausi kungova nyanzvi - iwe ndiwe chiremera.
Heano mamwe eKPI kana zvasvika pakutonga masimba ako:
Inoshanda uye ine chiremera webhusaiti mawebhusaiti ndeyechokwadi chinhu chikuru kana zvasvika pakuisa mawebhusaiti uye isu zvirokwazvo hatigone kukurukura chero hwaro hwebudiriro yeSEO pasina kusimbisa izvi.
Chero zvazvingaitika, zvinofanirwa kusimbiswa kuti kana tichitaura nezve zvinongedzo, ndezvekuvaka masimba edomain yako. Izvi zvinoreva kuti tinoda akakodzera mawebhusaiti akatowana chiremera munzvimbo yekutikurudzira uye hapana chibvumirano chiri nani webhusaiti inogona kuwana kubva kune mumwe muridzi webhusaiti pane chinongedzo.
Kunyangwe zvinongedzo zvakanakira, kungo taurwa munhau kana pamawebhusaiti ane chiremera munzvimbo yako kuchiri kuwedzera chiremera chako, mumaziso eGoogle. Naizvozvo, zvinotaurwa zvakare chimwe chinhu chekushandira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Chii chinonzi EAT uye ungachiite sei mubhizinesi rako?